Le yindawo ka Elise & Gabriel - I-Airbnb
Le yindawo ka Elise & Gabriel
Mirmande, Auvergne-Rhône-Alpes, i-France
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Manue
U-Manue Ungumbungazi ovelele
Ikamelo lakho endlini ezimele itshe ngaphakathi kwethu elisepulazini ngekhulu le-18, umfece yangempela kancane sokuzibusa Imininingwane bejabulela sasekuseni okumnandi futhi eqotho ngaleso sikhathi ngithululele bayokujabulela ukweluleka nawe ku sihambe zakho kanye nokuvakashela izindawo. Ngaphandle uma uthanda ukuba uphumule nge ichibi. Uze ube nethala elincane nokufinyelela efrijini, iketela, i-microwave ... imibhede engu-160 ukuze uthole ukunethezeka okwengeziwe.
Usepulazini lezithelo (ama-cherry, amabhilikosi, amapentshisi, ama-nectarines ...) emsebenzini okuvumela ukuthi uzuze ezithelweni ngokuthanda kwakho ngenkathi.
Ukuhlanganisa kwangempela kulele eqinisweni lokuthi igumbi lakho lisendlini ezimele enethala elincane ukuze ube ne-aperitif enengoma ye-cicadas noma ngenkathi uncoma ukushona kwelanga okuhle phezu kwezintaba ze-Ardèche.
Umhlobiso ungowomuntu siqu nendlu yokugezela e-tadelakt eluhlaza okwesibhakabhaka.
Uthule kodwa imizuzu emi-5 ukusuka kumgwaqo ophumayo ongu-n ° 17 futhi eduze kwedolobhana lasendulo i-Mirmande elihlukaniswe "amadolobhana amahle kakhulu eFrance".
ubusuku obungu-7 e- Mirmande
Usemizuzwini engaphansi kwemi-5 uhamba ngezinyawo enhliziyweni yedolobhana elihle kakhulu e-France, endaweni yasemaphandleni ethule ngenkathi uyimizuzu emi-5 ngemoto usuka kumgwaqo onguthelawayeka u-A7 ophuma n ° 17. I-Montélimar iyimizuzu engama-20. kanye ne-Valence emaminithini angu-35, ngakho-ke isendaweni ekahle yokuvakashela i-Drôme ne-Ardèche.
Ukushona kwelanga phezu kwezintaba zase-Ardèche kuhle kakhulu. Ungahamba ngezinyawo usuka ekamelweni lakho emagqumeni aseProvençal ngemuva nje kwepulazi.
Ngihlala ngitholakala ngangokunokwenzeka ukuze izivakashi zami zabelane ngothando lwami ngendawo yami enhle
UManue Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Mirmande namaphethelo